Ezona zinwele zilungileyo zobuso obujikelezileyo Amadoda aQinisekileyo
Kukho abo bacinga ukuba amadoda anobuso oburhangqileyo anexesha elinzima lokukhetha iinwele. Kwaye, nangona le ngcamango ingaba yinyani, inyaniso kukuba kukho inani le- iinwele kunye neenwele ezithanda ukuthanda amadoda aneempawu ezijikeleziweyo.
Ukongeza, kukho ubuqili obuninzi besitayile njengokukhula kweenwele zobuso, ezinokukunceda ukwenza umthunzi ebusweni kwaye wenze ezi ntlobo zobuso apho isilevu okanye i-cheekbones zingabonakali ngokukodwa. Ngokuchasene noko uninzi lunokucinga, ezi ntlobo zobuso azikhethi bodwa kubantu abanobunzima obuthile, kwaye kukho amadoda amaninzi angcakacileyo aneempawu ezijikelezwe ngokupheleleyo. Zonke zazo, namhlanje siza kubona ezona zinwele zilungileyo, ezona zintle ngolu hlobo lobuso obujikelezileyo.
1 Iifutshane ezimfutshane zobuso obujikelezileyo
2 Ixesha elide
3 Iqela kunye nepompadour
4 Umane ophakathi
6 Umtya osecaleni
7 Ukuhluthwa okufutshane
8 Mfutshane uphakamisile
9 Izinwele ezisikiweyo kubude obuphakathi ngee-bangs
10 Iinwele eziqhekekileyo
Iifutshane ezimfutshane zobuso obujikelezileyo
Uhlobo olufutshane lwee-bangs IsiFrentshi sivunyiwe ngokuthe tye kwaye ngamacala ahlukeneyo kukucheba iinwele okubeka isitayile kakhulu kubuso obujikelezileyo ukusukela ngokumakisha umgca ebunzini nakubo bonke ubuso, ubuso bubonakaliswa ngokwejiyometri ngakumbi, Ukudala uluvo lwe-angular ngakumbi kolu hlobo lobuso obunemilo ejikelezileyo. Ngaphakathi kwee-bangs ezimfutshane sinokubonisa umahluko ohlukileyo xa usenza isitayile; ngokuhamba kunye nokubonakala okungcolileyo okanye okuthe tye kwi-tabula rasa. Ixhomekeke kuwe.
Njengaleyo yangaphambili, ii-bangs ezinde kunye neenwele ezinefuthe elishiyiweyo kukusikwa okubonisa ubukhulu ebusweni obujikelezileyo. Kwaye iyaqhubeka ukusukela ngoko igubungela lonke ibunzi elingaphezulu elinika ubuso i-angular, ukujonga okungaphezulu koonxantathu. Njengakwii-bangs ezimfutshane, sinako ukusika isitayile ngeendlela ezahlukileyo, nangona olu hlobo lwee-bangs lulungele kakhulu ukuba zezinwele ngokuhamba kakhulu kunye nokubonakala kancinci kwendalo.
Iqela kunye nepompadour
Iitopees zakudala okanye iinwele zepompadour zongeza ukuphakama kubuso obujikelezileyo kwaye ngenxa yoko zibethe. Olu hlobo lwe iinwele ezinevolumu eninzi phezulu zandisa ubude bolu hlobo lobuso zibanika imilo embhoxo ngakumbi kwaye, ke, isitayile ngakumbi. Ukongeza, banikezela ngeesentimitha ezimbalwa ezingaze zenzakalise.
Izinwele ezinde-ubude yenye yeenwele zakudala ezisebenza kakuhle kolu hlobo lobuso kwaye yenze njalo kuba uphawula umahluko phakathi kobuso neenwele, enkosi kwizitshixo ezinde ubuso buba nobunzulu kwaye, ngele ndlela, ijongeka imbi ngakumbi. Umbuzo wobude beenwele ngumbandela wokungcamla, kukho abo bakhetha isiqingatha seenwele kunye namanqanaba amanqanaba ahlukeneyo okanye abo bakhetha ngokuthe ngqo uhlobo lwendoda lwento enokusikwa Bob umntu obhinqileyo. Kukho nabo bahamba ngokuthe ngqo kubude obuphantsi kwamagxa. Umbandela wokungcamla.
Indalo iphela yeenwele ezingapheliyo zenze lukhulu ngokuthanda amadoda anobuso obujikeleziweyo. Kwaye olu hlobo lokusika luhlala luthanda zonke iintlobo zamadoda kodwa ayenza ngokukodwa kumadoda anobuso obujikelezileyo kuba ebabonelela ngemilinganiselo ethile kubuso babo obuthe tyaba. Njengokuba usazi, ubuchule be Iqhubeka Isekwe ekuphelelweni okanye kwigradient, ekubeni zezinwele ezidlala kakhulu nge-chiaroscuro nangokuchaseneyo. Kumadoda anobuso obujikeleziweyo, umahluko omkhulu ngokusika kusebenza kakuhle kakhulu. Iqhubeka imfutshane kakhulu kwi-hems esecaleni kunye nokuvela ngokuthe ngcembe kobude, okuphela kwindawo ephezulu-ende kwaye kudityaniswe nomthamo ngaphandle kokufikelela kumaleya amade kakhulu.
Ukwahlula-hlula kwelinye icala zezinye iinwele ezingapheliyo ezihlala zenzelwe olu hlobo lobuso. Kwaye uyenza kuba ukwahlula ecaleni kudala umahluko kwinkcazo kubuso obujikeleziweyo. Ukufezekisa umphumo othomalalisayo sinokwenza isitayile ngeenwele ezincinci, nangona iinwele zisuswe ngokupheleleyo ebusweni kunye neentsuku ezimbalwa zeendevu zinokubhalwa kakhulu kolu hlobo lobuso obujikeleziweyo.
Ukusika ubude obuphakathi kukwafaka olu hlobo lobuso obujikeleziweyo, ngakumbi kwi Iinwele ezinamanqwanqwa amaninzi kunye namanqanaba ohlukileyo obudenge. Bongeza ubukhulu ebusweni kwaye enkosi kwiinwele kunye nentshukumo eninzi ukusukela bayakwazi ukufihla umphumo ocoliweyo wolu hlobo lobuso. Ukugxininisa ukusika kuya kufuneka udlale ngokusika okungaginyisi mathe kwisigaba esisikiweyo kwaye, ngendlela efanayo, dlala ukwenza intshukumo kumacala ahlukeneyo xa usenza isitayile.
Njengokunqunyulwa kwangaphambili, iinwele ezineziphumo ezibophekileyo kodwa ezinamanqwanqwa amafutshane ziyacenga. endaweni yokuthambisa iinwele phantsi Siza kudlala ukunika ubude beelayidi kunye neenwele ezihlanganisiweyo kunye neendlela ezahlukeneyo.
Izinwele ezisikiweyo kubude obuphakathi ngee-bangs
Njengeenwele ezithe nkqo, iinwele ezigobileyo kunye namadoda anobuso obujikeleziweyo, iinwele ezinde eziphakathi ezinama-bangs zihlala zithanda kakhulu. Kwaye bayenza kuba yenza umahluko onomdla kakhulu kunye nefuthe le-chiaroscuro, njengakwezinye iimeko, yongeza inkcazo kwaye wenze ubukhulu kubuso obujikelezileyo.
Zombini zinemigca eqhiwukileyo, kunye nemivumbo phakathi. Iinwele ezisongiweyo ezityhidiweyo kwezi nguqulelo zimbini bathambekele kwisimbo sobuso obujikelezileyo kwaye bayenze ngokuhamba kwee curls, ibalaselisa iinwele hayi ubuso. Ukongeza, iindevu kubude obahlukeneyo zinika inkcazo kunye nokungafani kobuso obujikeleziweyo.
Ukusikwa kwesimbo se-Asymmetrical kufanelekile nakubantu abanobuso obujikeleziweyo. Olu hlobo lokusika olwenza umahluko omkhulu phakathi kwelinye icala lobuso kunye nelichaseneyo, Bancoma ngokupheleleyo obu buso bujikelezileyo kanye ngesi sizathu. Zisebenza kakuhle kakhulu xa umahluko womelele kakhulu, umzekelo, icala elifutshane kakhulu ngokuchasene nelinye eline-cape ende kunye ne-bangs. Ukuba ukongeza, i khangela ehamba kunye nentshebe, olu hlobo lokusika ngokuqinisekileyo lubetha.
Ngaba ikhona into oyaziyo iinwele zobuso obujikelezileyo esingakhange siyikhankanye? Sishiyele uluvo uze usixelele ubuqhinga bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ezona zinwele zilungele amadoda anobuso obujikelezileyo
Isikhokelo sokudibanisa ibhulukhwe kunye nezihlangu
Fumanisa ukuba zeziphi iintlobo zeebhutsi ezizezona zilungele wena